Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray ciidanka la geeyey Beledweyne iyo xiritaanka Suuqa Bakaaraha | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray ciidanka la geeyey Beledweyne iyo xiritaanka...
Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray ciidanka la geeyey Beledweyne iyo xiritaanka Suuqa Bakaaraha
Muqdisho (Dalkaan.com) – Golaha Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray ciidamada ay Maanta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya geysay Magaalada Beledweyne ee Caasimadda Gobolka Hiiraan.
Manchester United oo ku biirtay kooxaha Chelsea iyo Liverpool ee Xiiseenaya...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay kula biirtay kooxaha Chelsea iyo Liverpool tartanka loogu jiro saxiixa garabka Leeds United Raphinha . 25 jirkan...
Ciidan beeleed gadoodsan oo ku hanjabay in doorasho aanay ka dhaceyn...
Lafta-gareen: Ficilkiisa iyo fahankiisa oo isburinaya!
Wararkii ugu dambeeyey Al-Shabaab oo la wareegtay degmada Matabaan
Ma guuleysan doonaa isbaheysiga cusub ee uu Farmaajo dhisayo?
Arsenal oo ka caga jiideysa inay bixiso qiimaha lagu heli karo...
Prof. Xasan Sheekh oo soo jeediyey arrin xasaasi ah marka ay...